Duane 'Imbwa' Chapman anobatanidzwa mwedzi gumi mushure mekufa kwemukadzi Beth - Nhau
Kuru Style Varaidzo Nhau Blog
Duane 'Imbwa iyo Bounty Hunter' Chapman ari kuita mwedzi gumi mushure mekufa kwemukadzi Beth
Mwedzi gumi mushure mekufa kwemukadzi wake, Duane Chapman akabatanidzwa nerutsva rudo rwaakange achidanana naye kwemwedzi mishoma.
Iyo 'Imbwa iyo Bounty Hunter' nyeredzi, uyo akarasikirwa mudzimai Beth Chapman kubatwa nekenza muHawaii munaJune 2019, vakakurudzira musikana mutsva Francie Frane, vaviri vacho vakaudza Britain Zuva mune imwe nyaya yakaburitswa muna Chivabvu 4.
jeremy allen chena musikana addison
Francie, 51 - uyo, saDuane, 67, achangobva kurasikirwa nemurume kubatwa nekenza . (Zuva zvakare rine mufananidzo wemhete yake.)
'Ini ndanga ndisingazvitarisiri zvachose. Ini ndinofunga ndanga ndaenda kunotora zvekudya uye pandakadzoka ndanga ndadzima mwenje zvese nemwenje mishoma uye mwenje wemakenduru wakabatidza, 'akatsanangura. 'Saka pandakapinda ndaive senge,' Wow, izvi zvinotyisa. ' Akabva ati, 'Pinda, gara pasi nekuti ndinoda kutaura newe.'
Saka ndafara neichi chitsauko chitsva! ️
Chinyorwa chakagovaniswa na @ franciefrane pana Kubvumbi 11, 2020 pa3: 17 pm PDT
'Saka ndakaisa chikafu chese mukicheni ndikapinda ndikati,' Ndinoziva kuti Mwari vakakuunza muhupenyu hwangu uye handidi kushandisa kana nguva imwe chete iwe usipo, '' Francie akaenderera mberi. 'Uye akapfugama pabvi rimwe ndokuvhura bhokisi remhete ndokuti,' Ungandiroorere toshandisa hupenyu hwedu hwese pamwe chete? ' Ndiani angati kwete kune izvo? Zvainakidza. '
Imbwa yakafara. Anofara kuve murudo zvakare uye nekuwana Francie uyo waanoda kuva, akaudza Zuva, 'muchato mukurusa wakambovepo.'
Kana vari vaviri vachachata riini? Vachamirira kusvikira COVID-19 yekukiya mirairo yasimudzwa, vakadaro. Ivo vanoda mhuri dzavo ipapo, kusanganisira Imbwa vana gumi nevaviri kubva pahukama hwake hwekare, pamwe nevanakomana vaviri vaFrancie uye vese vazukuru vavo. Imbwa yakaudzawo Zuva kuti inotarisira kuwana nzira yekuvhura yavo yemuchato kune vateveri vakamutsigira.
I scream & Cry Beth where are you why did you leave me then I look up & see you Francie & the pain turned to a smile I LOVE YOU MUKADZI !!
Chinyorwa chakagovaniswa na Duane Lee Chapman (@duanedogchapman) pana Kubvumbi 24, 2020 na6: 56 pm PDT
'Ndakave nevazhinji vateveri vanobvunza kuti' Paunoroora Francie, uri kuenda here kuti vateveri vako vauye? Saka isu tiri kutaura kutaurirana izvozvi nekuti ini ndoda kuivhura, 'akatsanangura, achiwedzera nezvekuda muchato wakakura,' ndine urombo asi ndizvo chete ini. Ndinovimba ndinogona kutaura naFrancie mairi ndovhura kuvateveri vangu, iyo Imbwa Puru, kune wese munhu. '
ndiani anthony anderson akaroora
Imbwa yakawedzera, 'Inenge iri gehena remutambo uye ndizvo chaizvo zvinodiwa nevanhu izvozvi. Ndakaudza Francie, vanhu, vanoda rudo rudiki mushure mekuvharirwa. Ndinoda pfungwa iyoyo. '
Nepo vamwe vakatsoropodza shirikadzi nemurume akafirwa, vakabuda pachena nezverudo rwavo pa Instagram muna Kubvumbi, zvekumhanya zvakanyanya, vanoti ivo vanoziva vari munzira chaiyo. 'Unoziva panogara paine vavengi, uye pamwe ndakasunga hafu yavo,' Imbwa yakanyunyuta.
Vana vaviri vembwa vakataura pachena rutsigiro rwavo, nemwanasikana Lyssa achiudza Zuva kuti Francie ndiye 'mukadzi anoshamisa,' uye mwanasikana Bonnie achinyora pa Instagram, 'Wese munhu ari kutonga baba vangu anofanira kunyengetera kuti vasazombofa vakarasikirwa newavanoda uye utongwe nekuyedza kuzadzisa chinzvimbo. ' Akaudza mutsoropodzi, 'Maonero ako haashande. Amai vangu vangadai vaida kuti afare. '
Francie akabvuma kuti panogara paine vanhu 'vanoti isu takaita izvi zvisirizvo kana isu takaita izvo zvisirizvo kana isu tafambira nekukurumidza kana nekukurumidza. Asi chokwadi ndechekuti tese tapedza makore matatu tichifamba pamwe nevakaroora tichirwara uye tinoziva kuti Mwari vakatiunza pamwechete ndosaka tisingatende kuti zvanyanya. '
Kunze tichinakidzwa nemamiriro ekunze ezuva ranhasi naLola iyo bulldog ️ Tinofamba nekutenda, kwete nekuona. Kurarama hupenyu hwedu nenzira inoenderana nekutenda kwedu kune chivimbo muzvipikirwa zvaMwari. 2 VaKorinde 5: 7
Chinyorwa chakagovaniswa na @ franciefrane pana Kubvumbi 23, 2020 pa10: 43 am PDT
Akawedzera achiti, '… kuti isu tiungane pamwe zvatakaita uye nekuvaka ushamwari uhwu nekuda kwezvedu zvatakasangana nazvo, ikazova nyaya yerudo. Hatitendi kuti zvanyanya. '
Vakabatana nenzira isingatarisirwi. Sekutaura kweZuva, Imbwa yakanga isingazive murume waFrancie, Bob, aive akashaya akafona akamusiira voicemail ichimukumbira kuti aite basa pane yake imba. Mushure mekunge Francie afonera Imbwa kumashure ndokumuudza zvakaitika, vakava shamwari, izvo zvakatungamira kudanana.
Dolly Parton pa 'kushongedza' muviri wake nematato akavanzika
Scarlett Johansson anopedzisa kurambana, anogadzirisa kurwira kwekuchengetana newaimbova Romain Dauriac
yechinyakare vana mafirimu kubva kuma90s
selena gomez aenda asina kupfeka
ben affleck naJennifer garner vana
iyo wendy show ndiye murume
john stamos tattoo yakazara imba
janet jackson nemurume wake mutsva
kendra uye hank kurambana muna Gumiguru